Ummata Gabrummaa Jala Jiruuf Furmaanni Qabsoo Qofaa dha!: Baarentuu Gadaa Irraa -
Ummata Gabrummaa Jala Jiruuf Furmaanni Qabsoo Qofaa dha!: Baarentuu Gadaa Irraa
Gabrummaa jala jiraachuun du’aan gararraa, jiraan garjallaa akkuma
jedhamu san akkaan hammaataa dha. Namni gabrummaa jala jiru; jiruun isaa jiruu jireenyaan gadiiti. Kan kiyya jedhu hin qabaatu, dubbatu kan jalaa dhagahu hin jiru, iyyatu kan mirmatuufis hin jiru. Nama ta’ee osoo jiruu gabroonfattootaan gadootti ilaalama. Abbaa biyyaa ta’ee osoo jiruu akka lammii lammaffaatti itti rorrifama. Qabeenya isaatti halagagaadha. Biyya isaatti Orma. Walumaa galatti nagahaan bahee galuu hin danda’u. Kan ummanni Oromoo barootaaf keessumaa bara bittaa wayyaanee keessa jirus dhugaadhuma akkasiiti.
Wayyaaneen ummata Oromoo afaan qawweettin erga gabrummaa hammaataa keessatti kuffiftee bara 1991 irraa eegalee haalli ummanni Oromoo keessa jiru jireenya hin jedhamu. Jiruu du’aan gararraa, jiraan
garjallaati. Osoo qabuu beela’eera.Daaree jira, biyya abbaa isaarratti
Previous Gambella Nilotes United Movement/Army Press Release
Next NU HAA BARAARU!!!!